Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment नवरात्रीको समयमा भुलेर पनि नलगाउनुस यस्तो कपडा नत्र ! क्रोधित हुनेछिन् दुर्गा माता - Pnpkhabar.com
पिएनपिखबर, भक्तपुर : नवरात्रीमा रङको विशेष महत्व हुने गर्छ। देवीलाई प्रसन्न पार्नको लागि हरेक दिनको हिसाबबाट शुभ रङको कपडा लगाएर पुजा गर्नु राम्रो मानिन्छ। आज हामी तपाईलाई बताउने छौ की नवरात्रीको समय किन कपडा लगाउँदा ध्यान दिनुपर्दछ ? आउनुहोस जानौ,..
नवरात्रीको समय भुलेर पनि कालो रङको कपडा धारण गर्नु हुदैन। कालो रङ दुखको प्रतिक मानिन्छ जसकारण कालो कपडा लगाउनु अशुभ हुने विश्वास छ। यदि तपाई दुर्गा भवानीलाई खुसी राख्न चाहानुहुन्छ भने कालो कपडा नलगाउनु नै उचित हुनेछ।
नवरात्रीमा सकेसम्म नयाँ कपडा लगाएर पुजा गर्नु पर्दछ। यस समय कसैसँग मागेको कपडामा साधना गर्नु हुदैन। आफ्नो स्वच्छ कपडा धारण गरेर मात्र पुजा गर्नुहोस।
नवरात्रीको दिन अनुसार लगाउनुहोस यस रङका कपडा …
नवरात्रीको पहिलो दिन माता शैलपुत्रीको पुजा हुने गर्छ। यस दिन पहेलो रङको कपडा लगाएर पुजा गर्नाले लाभ मिल्दछ।
नवरात्रीको दोस्रो दिन माता ब्रह्माचारिणीको पुजा हुँने गर्छ। यस दिन हरियो रङको कपडा लगाएर पुजा गर्नु शुभ रहन्छ।
नवरात्रीको तेस्रो दिन माता चन्द्रघन्टाको पूजा हुने गर्छ। यस दिन ग्रे(स्लेटी) को कपडा लगाएर पुजा गर्नाले विग्रिएको सारा काम बन्न थाल्नेछन।
नवरात्रीको चौथो दिन माता कुष्मांडालाई नौरंगी रंग काफी प्रिय लाग्छ।
नवरात्रीको पाचौ दिन माता स्कंदको पुजा हुने गर्छ। यस दिन सेतो रङको कपडा लगाएर पुजा गर्नु निकै शुभ मानिन्छ।
नवरात्रीको छैठौ दिन माता कात्यानीको पुजा हुने गर्छ। यस दिन रातो रङको कपडा लगाएर पुजा गर्नु पर्दछ।
नवरात्रीको सातौ दिन कालरात्री पुजा हुनेगर्छ। यस दिन निलो रङको कपडा लगाएर पुजा गर्नु शुभ मानिन्छ।
नवरात्रीको आठौ दिन माता महागौरीको पुजा गरिन्छ। यस दिन गुलाबी रङको कपडा लगाएर पुजा गर्नु राम्रो मानिन्छ।
नवरात्रीको नौ दिन अर्थात अन्तिम दिन माता सिद्धिदात्रीको पुजा हुने गर्छ। यस दिन बैंगनी रङको कपडा लगाएर पुजा गर्नु पर्दछ।
यी ४ राशिका महिलाले जहिले पनि आफ्नो पतिलाई दबाएर राख्छन्
राशी अनुसार कुन पर्स बोक्दा शुभ हुन्छ ? जान्नुहोस
बिर्सेर पनि यो दिशामा सिरानी लगाएर नसुत्नुहोस, घरमा हुनेछ अशुभ